ဦးအောင်သောင်း၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ယာဉ်တန်းမှ တိုက်မိ၍ သေဆုံးခဲ့သူ၏ ဇနီးနှင့်မိသားစု ဒုက္ခရောက်နေ – Voice of Voiceless အဓမ္မအသိမ်းခံရသော ကျောင်းပိုင်မြေနှင့် လယ်မြေများကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြတောင်းခံသော်လည်း ထူးခြားမှုမရှိ စစ်တပ်မှ အဓမ္မ လယ်သိမ်းယူခြင်း ကိုထင်ကျော်၏ ဆန္ဒပြမှုကြောင့် တာဝန်ရှိသူများကို စစ်ဆေးခဲ့သော အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၇ ခုနှစ်) အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေး တပ်၏ တတိယလေးလပတ် အစီရင်ခံစာ တပ်အင်အားပြုန်းတီးမှုနှင့် ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အနာဂတ် Edition: HOME | Go to DASHBOARD > Appearance > Menus to set up the menu.
Breaking News > သတင်းများ, မြန်မာပြည်မှပေါက်ကြားမှုများကိုထင်ကျော်၏ ဆန္ဒြ...
Published On: Sat, Mar 31st, 2012 သတင်းများ | By Omegaz ဦးအောင်သောင်း၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ယာဉ်တန်းမှ တိုက်မိ၍ သေဆုံးခဲ့သူ၏ ဇနီးနှင့်မိသားစု ဒုက္ခရောက်နေ
Tags By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကို ဦးအောင်သောင်းမှ နေရာမှာတင် အပြီးဖြေရှင်းရန် လက်အောက်ငယ်သားများအား ညွှန်ကြားလိုက်သည့်အတွက် သေဆုံးပြီး နောက်တရက်မှာပဲ ဈာပန အခမ်းအနားကို သေဆုံးသူ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ကပဲ ဆောင်ရွက်လိုက်ရသည်ဟု သိရပါသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာတော့ နွားထိုးကြီးရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးမှ ဦးကံစိန်၏ ဇနီးဖြစ်သူကို ကားပိုင်ရှင်က တွေ့ဆုံစကားပြောချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ “ကျမ ဘာလုပ်ကိုင်စားလဲ၊ မိသားစု ဘယ်နှယောက် ကျန်လဲ” စတဲ့ မေးခွန်းတွေသာ မေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်သည်ဟု မဗေဒါက ပြောပါသည်။
ကိုထင်ကျော်၏ ဆန္ဒပြမှုကြောင့် တာဝန်ရှိသူများကို စစ်ဆေးခဲ့သော အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၇ ခုနှစ်)
အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေး တပ်၏ တတိယလေးလပတ် အစီရင်ခံစာ
တပ်အင်အားပြုန်းတီးမှုနှင့် ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အနာဂတ်
Displaying3Comments Have Your Say aaa says:	March 31, 2012 at 10:54 pm	လူ လို ပြော ။ လူ လို သိ အောင်သောင်း
Reply	nanyu says:	April 1, 2012 at 2:03 am	Burma is still getting in the dark. Why silence need initiative. Obsessional hatred never lost in this country.
Reply	Myo Han Htun says:	April 2, 2012 at 4:11 am	မင်းတို့ကြံ့ဖွတ်တွေလောက်တော့ အမေစုက ပျင်းသနားတယ် ..ဟိုကမဲအပြတ်အသတ်ကိုနိုင်တာ ကိုကိုးနတ်နဲ့ပေါက်စီလိုတခြားစီပဲ.. မင်းတို့ကြံ့ဖွတ်တွေ ကြိုတင်မဲ ဒီထက်ပိုခိုးကြအုံး..
ဥိးသန်းဆွေ on ရှေ့နေများကွန်ယက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲဥိးသန်းဆွေ on ရှေ့နေများကွန်ယက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲဥိးသန်းဆွေ on ရှေ့နေများကွန်ယက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲjame on တပ်အင်အားပြုန်းတီးမှုနှင့် ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အနာဂတ်လှိုင်ဘွား on မြန်မာပြည်မှ ပေါက်ကြားမှုများ ကဏ္ဍဖြင့် အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်လွှင့်တော့မည် ဓါတ်ပုံသတင်း
See also Burma Vj Com
All Rights Reserved Burma VJ Media Network